काठमाडौमा विद्युतिय रेलको सुरुवात गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा - Himalayan Kangaroo
काठमाडौमा विद्युतिय रेलको सुरुवात गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा
Posted by Himalayan Kangaroo | १ माघ २०७२, शुक्रबार १२:०१ |
काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौमा विद्युतिय रेलको सुरुवात गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । थारु कल्याणकारणी सभाले शुक्रबार काठमाडौमा आयोजना गरेको मागी महोत्सवको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले
छिट्टै विद्युतीय रेलको प्रक्रिया शुरु गर्ने बताउनुभयो । त्यसक्रममा उहाँले आफूले काम गर्ने योजना बनाउँदा हावादारी गफ भनिएकोमा आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो । आफू सिंहदरबारमा फोटो झुण्डाउनकालागि प्रधानमन्त्री नभएको र देशको विका आफ्नै कार्यकालमा गरेर छाड्ने उहाँको दावि थियो । ‘काठमाडौमा इलेक्ट्रिक रेल चल्छ । केही समयपछि मैले त्यसको सुरुवात गर्ने छु । काठमाडौ,पोखरा र उत्तरदक्षिण बाटाहरु बन्छन । त्यो नगरेर मैले के गर्ने ? बालुवाटार र सिंहदरबार,सिंहदरबार र बालुवाटार गरेर समय काट्ने ?’ – उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
‘मैले गर्छु भन्यो भने केहीलाई रिस उठ्छ । काम गरेर देशलाई अगाडी बढाएर जाने हो । कुनै बहादुर छ नेपाल दुईदिनभीत्र केही गरिहाल्ने ? त्यस्तो छ भने मलाई भन्नु पर्यो । नभए मेरो योजना छ । त्यो योजना अगाडी बढ्छ । अचम्म लाग्छ । गर्छु भन्न नपाइने ?’ – ओलीले आफ्नो आलोचनाको प्रतिवाद गर्दै भन्नुभयो ।
Previousके कारणले अष्ट्रेलियामा आउन ३ वर्षे प्रतिबन्ध लाग्छ ?
Nextकाठमाडौँमा स्वाइन फ्लुबाट मृत्यु
अन्तिम दिनको प्रचारमा शीर्ष नेता व्यस्त
२८ बैशाख २०७४, बिहीबार ०२:१८
१४ पुष २०७२, मंगलवार ०३:५५
१० बैशाख २०७५, सोमबार ०२:४१
‘ अब प्रदेश नम्बर ६ का जनता गरिब हुनु पर्दैन ‘
२१ माघ २०७४, आईतवार ०९:४३